578s မိုင်ယာမီ Mega ထောင်ထဲမှာအတွင်းကအရူးဘဝ images and subtitles
သင်မကျူးလွန်ဘူးလို့သင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇ ၀ တ်မှုနဲ့တရားစွဲခံရတယ်။ သင်အပြစ်ရှိကြောင်းသက်သေပြပြီးသည်အထိသင်အပြစ်မရှိပါ၊ သို့သော်တရားရုံး၏ရက်စွဲသည်ခဏကြာပါလိမ့်မည် ရောက်လာပါ ဤအချိန်အတောအတွင်းသင်၏နေထိုင်ရာနေရာသည် Miami Mega Jail ဟုခေါ်သည့်နေရာဖြစ်လိမ့်မည်။ မင်းကငယ်သေးတယ်၊ တစ်ခါမှထောင်မချဖူးဘူး၊ မင်းနေတဲ့နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားတာကိုမင်းမမြင်နိုင်ဘူး။ ဆဲလ်တွေအများကြီးနဲ့ပြည့်နေတဲ့လူအများစုကြွေးကြော်သံ၊ အော်ဟစ်သံ၊ ဘားပေါ်တက်ပြီးခြိမ်းခြောက်ခြင်း မင်း ဒါဟာပရမ်းပတာပါပဲ။ သင့်အခန်းထဲတွင်သင့်ကိုစောင့်နေသည့်အမျက်ဒေါသနှင့်ကြည့်တတ်သော၊ အန္တရာယ်ရှိသောအမျိုးသား ၂၀ မှကြိုဆိုသည့်ကော်မတီဖြစ်သည်။ သင်ဤလူများနှင့်မယှဉ်ပြိုင်ပါ၊ သို့သော်သင်တိုက်ခိုက်ရတော့မည်မဟုတ်ပါ၊ သော။ သင်ရုံသေတတ်သောတိုက်ခိုက်ရေး၏နယ်ပယ်တွင်ဝင်ကြ၏။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကယူအက်စ်မှာအဆိုးရွားဆုံးသောခရိုင်ထောင်ကိုရွေးဖို့ခက်တယ် ထိပ်ဆုံးမှယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်နေရာများသို့မဟုတ်စာရင်း၏အောက်ခြေကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောသင့်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုမည့်နေရာ၌တည်းခိုသူမည်သူမဆိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါ အဆိုးဆုံးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ်၊ အကယ်၍ သင်သည်ထောင်ထဲမှထွက်လာသောတင်းကျပ်သောရာဇ ၀ တ်သားများနှင့်စကားပြောပါကပြောသင့်သည် နှင့်ထောင်များသူတို့မကြာခဏထောင်ဒဏ်အများကြီးပိုဆိုးကြောင်းသင့်အားပြောပါလိမ့်မယ်။ လူအများစုကထောင်သည်ထောင်ထက်ထောင်ချောက်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုပိုဖြစ်သည်ဟုပြောကြသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည့်နေရာကို“ ငရဲတွင်ပရဒိသု၌၎င်း၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနကျနော်တို့သဘောမတူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ပြောနေတာက“ Miami-Dade Corrections and Rehabilitation ဌာန” တွင်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Boot စခန်းအပါအ ၀ င်ယူနစ်များစွာပါဝင်သည်။ အဲဒီစခန်းကိုမဖြတ်နိုင်တဲ့သူတွေကထောင်ထဲရောက်သွားနိုင်တယ် သူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်များတွင်။ Boot Camp သည်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ထောင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပြောလိမ့်မည် အားလပ်ရက်စခန်း။ စနစ်တစ်ခုလုံးတွင်လူပေါင်း ၇၀၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိသော်လည်းလူပေါင်း ၁၁၄,၀၀၀ ကဲ့သို့သောအရာသည်အလိုရှိသည် နှစ်စဉ်တံခါးများကိုဖြတ်သန်းပါ - တစ်ရက်လျှင် ၃၂၀ ဖြစ်သည်။ ဒါကအလုပ်များတဲ့နေရာပါ၊ သို့တိုင်၎င်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ၇ ခုမြောက်အကြီးဆုံးထောင်စနစ်ဖြစ်သည်။ အကျဉ်းသားအများစုသည်ထိုတွင်တာရှည်စွာနေထိုင်ကြပြီးစနစ်တစ်ခုလုံးတွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကုန်ဆုံးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ၂၂ ရက်ပဲရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်းရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကိုစောင့်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မယ် ငါးနှစ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအဓိကယူနစ်များထဲမှတစ်ခု၊ ခေါင်းစဉ်များအများဆုံးထိသည့်နေရာတစ်ခုသို့ပို့ဆောင်သည် ၎င်း၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအခြေအနေများသည်။ ၎င်းကိုတရားခွင်မတိုင်မီထိန်းသိမ်းရေးဌာနဟုခေါ်တွင်သည်သို့မဟုတ်တစ်ခါတစ်ရံပင်မထောင်ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်လူ ၁,၇၀၀ ဝန်းကျင်ရှိသည်။ သူတို့ထဲကသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေကတည်းကအများစုမှာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအပြစ်မဲ့နေကြသည် အပြစ်ရှိပေမယ့်တရားရုံးရက်စွဲကိုစောင့်ဆိုင်းနှစ်ပေါင်းကြာလိမ့်မယ်။ ဆဲလ်တွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါဒီအခြေအနေမျိုးကိုဖြေရှင်းဖို့မလွယ်ကူပါဘူး မတည်ငြိမ်သောအရာများမည်မျှရှိသည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ အကျဉ်းထောင်များ၌အကျဉ်းကျခံနေရသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့အမှုကိစ္စများကိုတိုက်ခိုက်လိုသောကြောင့်၊ အပြင်ဘက်မှာအပြစ်မဲ့လားထောင်ထဲကိုထွက်ချင်တာလား အဆိုးဆုံးအထပ်မှာစွပ်စွဲခံရသူများထဲတွင်အန္တရာယ်အရှိဆုံးပြစ်မှုကျူးလွန်သူများထားရှိသည့်နေရာများဖြစ်သည် ကြမ်းပြင်ငါးခုနှင့်ခြောက်လုံး။ ဒီမှာအခန်းတွေကများသောအားဖြင့်ယောက်ျား ၁၅ ယောက်ကနေ ၂၅ ယောက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအဲဒီမှာရှိနေတယ် အဆင့်ဆင့်တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ။ အဲဒီမှာယောက်ျားတွေအများကြီးပြောချင်သကဲ့သို့, ဒါဟာအသင့်လျော်ဆုံး၏ရှင်သန်မှုပါပဲ, ဒါကြောင့်သင်မလျှင် သင်တစ် ဦး ခက်ခဲအချိန်ရှိစေခြင်းငှါတစ် ဦး တိုက်လေယာဉ်။ သငျသညျအခြို့သောတုံးလိုချင်တယ်, သင်ကအဘို့စစ်တိုက်ခြင်းငှါရှိသည်လိမ့်မယ်။ အိုကေ၊ သင်သည်ဆဲလ်ထဲတွင်အဆိုးဆုံးနေရာရှိခြင်းကိုဂရုမစိုက်ပါ၊ သို့သော်တစ်ယောက်ယောက်ကသာလျှင် မင်းပစ္စည်းတွေကိုယူလား အကျဉ်းသားတစ် ဦး က“ အားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်အမြတ်ထုတ်တာပါ” ဟုပြောသည်။ မင်းရဲ့အရာတွေကိုမင်းတိုက်မတိုက်ဘူးဆိုရင်မင်းဟာအချိန်ငရဲတစ်ခုရှိလိမ့်မယ် အနုတ်လက္ခဏာ။ သငျသညျ snitch လျှင်, သင်ကာကွယ်မှုထဲသို့သွင်းထားရမဟုတ်လျှင်သင်သွားလေရာရာ၌ရိုက်နှက်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားအကျဉ်းသားတစ် ဦး ကသူ၏အခန်းထဲရှိသင်၏ပထမနေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့သင်စစ်တိုက်ရမည်ဖြစ်သည် သူတို့သည်သင့်ကိုလူတစ် ဦး အနေဖြင့်စစ်ဆေးလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲ? သင်မတိုက်ခိုက်လျှင်သူ၌သင်တစ်ခုခုမှားနေကြောင်းလက္ခဏာပြသည်။ မင်းကမင်းကိုမတိုက်ခိုက်ချင်ဘူး၊ ဒါဟာကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဟန်မရှိပေမယ့်အကျဉ်းသားကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဖြစ်တယ်၊ ဒီအချက်ကအကျဉ်းသားတွေဟာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှင်းပြနိုင်ဘူး။ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတိုက်ဘူးဆိုရင်အဲဒါကိုလိုက်နာမယ်ဆိုတာရှင်းပြခဲ့တယ် ဆဲလ်တပြင်လုံးကိုလူတစ် ဦး ရိုက်နှက်လိမ့်မယ် code ။ တစ်ခါတစ်ရံအသေးငယ်ဆုံးချိုးဖောက်မှုအတွက်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုရိုက်နှက်တတ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည် သူတကယ်မလုပ်ခဲ့သည့်အရာအားစွပ်စွဲခဲ့သည်။ ငါ့အစားအသောက်ကိုအဘယ်သူခိုးသနည်း။ မည်သူမျှမတုန့်ပြန်ပါ။ မင်းကအစွမ်းမဲ့တယ်၊ မင်းအပြစ်တင်တာပဲ။ သူမလုပ်ခဲ့ရင်သူမလုပ်သင့်ဘူး၊ လူတိုင်းအဲဒီမှာထဲမှာပြောသကဲ့သို့, သင်ရုံပြန်တိုက်ခိုက်ရန်ရှိသည်။ သူတို့မှာသူတို့ရေးထားတဲ့လက်ရေးမူတွေအများကြီးရှိပြီး GABOS လို့ခေါ်တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ“ ဂိမ်းသည်စာနာမှုအပေါ်အခြေခံသည်မဟုတ်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အချို့သောဖယ်ဒရယ်အကျဉ်းထောင်များနှင့်မတူဘဲမည်သူမဆို၏လက်အောက်သို့ကျရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အကျဉ်းထောင်သည်ရက်စက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကြားရသော်ငြားထောင်သည်အကျဉ်းထောင်ထက် ပို၍ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာရှိသည် ထောင်စနစ်များ၏။ ဖိုရမ်များကိုသာသွားပါ၊ ထောင်ထဲမှာအတော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ သေချာတာကလူအများစုကအပြစ်ရှိတယ်လို့တောင်မသတ်မှတ်ကြသေးဘူး ပိုဆိုးနှင့်ပိုပြီးခြိမ်းခြောက်မှုများရင်ဆိုင်ရ။ ပထမ ဦး ဆုံးတိုင်မားများသည်အလွန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်ခဲ့ပြီးများသောအားဖြင့်ဖြစ်သင့်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နေမကောင်းအဲဒီမှာအတွက်ဝန်ရ; အစားအစာကကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ ဆဲလ်တွေကညစ်ပတ်တယ်၊ ကြောင်းဆဲလ်ထဲမှာသူတို့ရဲ့အချိန်၏။ အကျဉ်းသားအမြောက်အများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ထိုအရာများမှလွတ်မြောက်ရန်သူတို့က“ ကျည်ဆံ” လုပ်လိမ့်မည်ဟုဆိုကြသည် မင်္ဂလာပါ။ ကျည်ဆံသည်ထောင်ထဲတွင်တစ်နှစ်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့ထောင်ထဲမှာအခြေအနေတွေပိုဆိုးရွားနေရတာလဲ၊ ကောင်းပြီ၊ သူတို့ကလူတစ်ယောက်ကိုရှည်လျားလွန်းစေဖို့ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ ပြproblemနာကတိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုတောင်မှငရဲဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ သူတို့ရဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးနှောင့်နှေးလျှင်တိုတောင်းနေ။ အကျဉ်းထောင်သည်နှစ်သိမ့်မှုတစ်စုံတစ်ရာပေးရန်ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ထောင်သည်အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ငရဲဖြစ်သည်။ ထောင်ထဲတွင်ငရဲကလေးနှင့်အဆိုးရွားဆုံးသောနာကျင်မှုကိုခံစားနေရသည် မင်းထွက်ပေါက်ကိုမသိဘူးလား ထိုကြောင့်အကျဉ်းသားများသည်များသောအားဖြင့်အမျက်ထွက်ခြင်း၊ စိတ်ဆိုးခြင်း၊ ၁၈ လကြာ crank-athon ချွတ်ပြီးနောက်အရူးဖြစ်သည်။ ပြောသမျှအားလုံးဟာအဆိုးဆုံးနေရာတွေကိုပို့လိုက်တာလား။ မင်းကိုမိုင်ယာမီရှိ ၆ ထပ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းသို့ပြန်သွားကြစို့။ တစ်ခန်းထဲရောက်တာနဲ့အစောင့်တစ်ယောက်ကထွက်သွားတယ်၊ ပြီးတော့အစောင့်တွေကသူတို့တုံ့ပြန်လို့မရဘူးဆိုတာဝန်ခံကြတယ် အဲဒါကိုရပ်တန့်ဖို့အလုံအလောက်အကြမ်းဖက်အလျင်အမြန်ရန်။ သူတို့သည်အကျဉ်းသားများအားသူတို့၏သင်္ကေတများသို့ထားခဲ့သည်ကိုဝန်ခံကြသည်။ ထိုအစောင့်များကပြင်းထန်သောရိုက်နှက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ဘာမျှမတတ်နိုင်ဟုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆိုကြသည် ထိုး, ခိုးမှု။ နေရာတိုင်းမှာရှိနေပြီးအရာအားလုံးကိုမြင်နိုင်ဖို့သူတို့မှာမလုံလောက်ဘူး။ ထိုအစောင့်သည်ထွက်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ၅ ထပ်နှင့် ၆ ထပ်တွင်စစ်တိုက်ရန်သင်ကျန်ရစ်သည် ဒီအရုပ်ဆိုးဟောင်းနွမ်းအညိုရောင်အဆောက်အ ဦး ။ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲ? အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကတလျှောက်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး? အကျဉ်းသားတစ် ဦး က“ ဒီကုဒ်ကကုဒ်ပါ” ဟုဖြေသည်။ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ဆိုလိုသည်မှာသင်တိုက်ခိုက်နေသူကိုမလေးမစားလုပ်နေသည်ဟုသင်မြင်ပါက၊ လူတစ်ယောက်နှင့်သင်အကြောင်းပြခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်စတင်ရန်သင့်လျော်သောနေရာမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လမ်းမများမှလာသူများသည်လမ်း၏စည်းမျဉ်းကိုနားမလည်ကြပါ။ ဤသို့သောအနောက်တိုင်းသဘောထားသည်သိပ္ပံပညာရှင်များဟုခေါ်သည့်“ ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည် ဂုဏ်အသရေ။ " မင်းယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုရှုတ်ချတယ်၊ သင်တိုက်ခိုက်တယ်၊ ဓားဆွဲတယ်၊ ပြင်ပကမ္ဘာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာမှထွက်ပေါ်လာပြီးများသောအားဖြင့်ထောင်ထဲတွင်ရှိသည် ဒီကုဒ်, ဂုဏ်အသရေ၏ဤယဉ်ကျေးမှု, နေဆဲပျံ့နှံ့နေသည်။ မိုင်ယာမီရှိအဓိကထောင်အားခိုးယူခြင်းနှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းတို့တွင်အဆိုးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် အမရေိကအထီး -to- အထီးအလွဲသုံးစားမှု၏အခြားအမျိုးအစားများအတွက်။ အစောင့်များသည်ဆဲလ်များကိုတစ်နာရီလျှင်တစ်နာရီသာကင်းလှည့်လျှင်ကြောက်စရာကောင်းသည့်အရာများဖြစ်လာနိုင်သည်။ အားနည်းသောအကျဉ်းသားများသည်အထွတ်အမြတ်ထားသည့်သားကောင်များကြားတွင်သားကောင်အဖြစ်သာကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာကထောင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအများကြီးတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးတစ်ခုကအများကြီးပိုများခဲ့ပါတယ် ကင်မရာများကို install လုပ်ပြီးပါပြီ။ ထိုအခါစိတ်ရောဂါမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသောက်သောလူအများနေထိုင်ရာဤထောင်၏ပြtheနာရှိနေသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းဖြစ်နေသူတစ် ဦး သည်အခြားအကျဉ်းသားများနည်းတူပြုမူသည့်အခါအကျဉ်းသားတိုက်ပွဲများမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည် မကြိုက်ဘူး မာရှယ်စီမံကိန်းကဖော်ပြသည်မှာ“ မိုင်ယာမီအကျဉ်းထောင်သည်စနစ်အတွက်အကြီးဆုံးဌာနဖြစ်သည် ဖလော်ရီဒါမှာရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေမကောင်းကလူ။ " စိတ်ရောဂါသည်များသည်လုယူရာဥစ္စာဖြစ်လာလေ့ရှိပြီးအမျိုးသား ၂၀ ကျော်နှင့်အတူကြမ်းပြင်ပေါ်သို့တက်လာတတ်သည် သူတို့ကို pummel ဖို့လှည့်။ ဤသည်ဆုတ်ခွာကုသပုံဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်နေ့ရက်တွင်မဆိုလူနာသည်ရောဂါလက္ခဏာမပြနိုင်သည့်အပြင်ထွက်လာတတ်သည်။ ၎င်းသည်အသွေးဖြန်းနေသောဆုံလည်တံခါးနှင့်တူသည်။ တကယ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေများလွန်းလို့တရားရေးဌာနကမိုင်ယာမီ - ဒေးဒ်ကပြောတယ် ထောင်စနစ်သည်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောကြောင့်အကျဉ်းသားများသာမကအစောင့်များသည်လည်းအန္တရာယ်များစွာနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုတယ် "ဟုအဆိုပါဌာနကဆိုသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကငါးလအတွင်းလူရှစ် ဦး သေဆုံးပြီးနောက်ထောင်သည်စိစစ်စစ်ဆေးမှုများစွာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမာသူများသေဆုံးခြင်းသုံးခုသည်အထူးသဖြင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟု DoJ ကဆိုသည်။ ဆိုင်းငံနေစဉ်တွင်ကားမောင်းရန် ၀ င်ရောက်နေသောယောက်ျားတစ်ယောက်သည်စနေနေ့တွင် ၀ င်ရောက်ပြီးနောက်သေဆုံးသွားသည် တနင်္လာနေ့။ တစ်ပတ်အတွင်းနောက်ထပ်နှစ် ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ ကော်မရှင်နာတစ် ဦး ကမူစနစ်သည်အလွန်အမင်းကျိုးပဲ့နေသည်ဟုဆိုခဲ့သည် သေဆုံးသွားသောရှစ် ဦး မှတစ် ဦး သည်အကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရန်ဆင်းသက်ရန်ခုန်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် သူ့ကိုရိုက်နှက်ဖို့သူ့နောက်ကြွလာခဲ့ကြသည်။ ဓားများကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ပိတ်ခဲ့သည့်အဆိုးဆုံးကြမ်းပြင်ကိုတစ်ခါတစ်ရံ“ မေ့လျော့ကြမ်းပြင်” ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာနဝမအဆင့်ဖြစ်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမမာဖြစ်နေတဲ့လူအများစုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့တယ်။ အကျဉ်းသားများမကြာခဏစွန့်ခွာ။ လျစ်လျူရှုခံကြရပြီးများစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်အကျဉ်းသားများဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည် ကိုယ်ပိုင်ဘဝ ဤအဆင့်တွင်ထိုကာလ၌အကျဉ်းသားများမှာကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်စောင်မပါဘဲအိပ်ခဲ့ကြရသည် ၎င်းသည်လူသားဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သောစိတ်ရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာစက်ရုံဖြစ်သည်။ အကျဉ်းသားအချို့သည်အိမ်သာထဲမှသောက်နေရသည်ဟုတွေ့ရှိရပြီး၊ "ကြောက်မက်ဖွယ်" ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်ခဲ့သည်။ အများပြည်သူအော်ဟစ်သံများရှိခဲ့သည် ဒါပေမယ့်မင်းကြားဖူးတဲ့အတိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြwithနာများရှိနေသူတစ် ဦး သည်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရသောအခါပြproblemsနာများရှိနေသေးသည် လူသားထုတန်ဖိုးများကိုတမင်သက်သက်မလိုအပ်သောမျက်မှောက်ခေတ်လမ်း gladiators နှင့်အနိုင်ကျင့်သူများနှင့်အတူ။ အထပ်အားလုံးဟာငါတို့ပြောခဲ့သည့်ပုံပြင်များကဲ့သို့မကောင်းသကဲ့သို့အထူးသဖြင့်အချို့ကိစ္စများတွင်ဖြစ်သည် အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အားနည်းချက်ရှိသူများတစ် ဦး တည်းနေအိမ်လိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အဓိကထောင်ထဲမှာရှိမြင့်သောကြမ်းပြင်များထဲမှတက်အဆုံးသတ်နှင့်သင်ဆက်ဆက်မြင်လိမ့်မည် ကမ္ဘာပေါ်မှာအပြင်းထန်ဆုံးအကျဉ်းထောင်တစ်ခုမှာချုပ်နှောင်ခံနေရတာနဲ့တူတယ်။ အခြားထူးခြားသောပြilနာများလည်းရှိသည်။ 2019 ခုနှစ်တွင်ရုတ်တရက်နာမကျန်းမှုကြောင့်ဤလူမှလူ 17 ဦး ကိုဆေးရုံသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ အများအပြားကန်ထမ်းများလွန်းပါကဆင်းလာ၏။ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ? ဘယ်သူမှမသိဘူး ထူးဆန်းသောအရည်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်ဗုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုခေါ်ယူခဲ့သော်လည်းပြန်လှည့်လာခဲ့သည် အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ထွက်။ လူတို့ကစစစစစစခိုးဝဲသောအကြောင်းပြချက်မှာအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောမီးခိုးငွေ့များဖြစ်သည် မူးယစ်ဆေးဝါး။ အကယ်၍ အဝေးမှမီးခိုးငွေ့များကိုရှူမိပါကလူတစ်ယောက်ကိုဆိုးရွားလှသည့်ပျော့ပျောင်းစေနိုင်သည်။ သူတို့အဲဒီမှာဘာကမ္ဘာပေါ်မှာဆေးလိပ်သောက်နိုင်ခဲ့တာလဲ အာရုံကြောဓာတ်ငွေ့? ဒီနေရာဟာဘယ်လောက်အရူးလဲဆိုတာပဲပြတယ်။ ဤထောင်ကိုရည်စူးထားသည့် Facebook စာမျက်နှာတွင်တွေ့ရှိသောပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ဖြင့်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထားခဲ့ပါလိမ့်မည်။ "ငရဲပြည်မှကြိုဆိုပါတယ်။ လူတစ် ဦး သည်ထောင်ချခံရခြင်း၏ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းထက်သေခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည် ဒီညစ်ပတ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောရဆေိုးအတွက်။ " မင်းကို Miami Jail ကိုပို့ဖို့မလိုချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲ့နှစ်ခုထဲကတစ်ခုကိုနှိပ်ချင်တယ် ဗွီဒီယိုများ ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကို Infographics Show (သို့) ဒီဗီဒီယိုကနေနောက်တစ်ခုကြည့်ပါ ဦး ဒီမှာ။ သင်တစ် ဦး တည်းသာရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အခြားဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကြည့်။ သွားကြည့်ပါ။
မိုင်ယာမီ Mega ထောင်ထဲမှာအတွင်းကအရူးဘဝ
< start="1" dur="4.029"> သင်မကျူးလွန်ဘူးလို့သင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇ ၀ တ်မှုနဲ့တရားစွဲခံရတယ်။ >
< start="5.029" dur="4.521"> သင်အပြစ်ရှိကြောင်းသက်သေပြပြီးသည်အထိသင်အပြစ်မရှိပါ၊ သို့သော်တရားရုံး၏ရက်စွဲသည်ခဏကြာပါလိမ့်မည် >
< start="9.55" dur="1"> ရောက်လာပါ >
< start="10.55" dur="4.18"> ဤအချိန်အတောအတွင်းသင်၏နေထိုင်ရာနေရာသည် Miami Mega Jail ဟုခေါ်သည့်နေရာဖြစ်လိမ့်မည်။ >
< start="14.73" dur="3.93"> မင်းကငယ်သေးတယ်၊ တစ်ခါမှထောင်မချဖူးဘူး၊ >
< start="18.66" dur="3.42"> မင်းနေတဲ့နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားတာကိုမင်းမမြင်နိုင်ဘူး။ >
< start="22.08" dur="5.45"> ဆဲလ်တွေအများကြီးနဲ့ပြည့်နေတဲ့လူအများစုကြွေးကြော်သံ၊ အော်ဟစ်သံ၊ ဘားပေါ်တက်ပြီးခြိမ်းခြောက်ခြင်း >
< start="27.53" dur="1"> မင်း >
< start="28.53" dur="1"> ဒါဟာပရမ်းပတာပါပဲ။ >
< start="29.53" dur="4.32"> သင့်အခန်းထဲတွင်သင့်ကိုစောင့်နေသည့်အမျက်ဒေါသနှင့်ကြည့်တတ်သော၊ အန္တရာယ်ရှိသောအမျိုးသား ၂၀ မှကြိုဆိုသည့်ကော်မတီဖြစ်သည်။ >
< start="33.85" dur="4.26"> သင်ဤလူများနှင့်မယှဉ်ပြိုင်ပါ၊ သို့သော်သင်တိုက်ခိုက်ရတော့မည်မဟုတ်ပါ၊ >
< start="38.11" dur="1"> သော။ >
< start="39.11" dur="2.04"> သင်ရုံသေတတ်သောတိုက်ခိုက်ရေး၏နယ်ပယ်တွင်ဝင်ကြ၏။ >
< start="41.15" dur="4.83"> ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကယူအက်စ်မှာအဆိုးရွားဆုံးသောခရိုင်ထောင်ကိုရွေးဖို့ခက်တယ် >
< start="45.98" dur="4.989"> ထိပ်ဆုံးမှယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်နေရာများသို့မဟုတ်စာရင်း၏အောက်ခြေကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောသင့်သည်။ >
< start="50.969" dur="3.721"> ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုမည့်နေရာ၌တည်းခိုသူမည်သူမဆိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါ >
< start="54.69" dur="2.869"> အဆိုးဆုံးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ်၊ >
< start="57.559" dur="3.631"> အကယ်၍ သင်သည်ထောင်ထဲမှထွက်လာသောတင်းကျပ်သောရာဇ ၀ တ်သားများနှင့်စကားပြောပါကပြောသင့်သည် >
< start="61.19" dur="3.35"> နှင့်ထောင်များသူတို့မကြာခဏထောင်ဒဏ်အများကြီးပိုဆိုးကြောင်းသင့်အားပြောပါလိမ့်မယ်။ >
< start="64.54" dur="3.38"> လူအများစုကထောင်သည်ထောင်ထက်ထောင်ချောက်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုပိုဖြစ်သည်ဟုပြောကြသည်။ >
< start="67.92" dur="3.61"> ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည့်နေရာကို“ ငရဲတွင်ပရဒိသု၌၎င်း၊ >
< start="71.53" dur="2.62"> ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနကျနော်တို့သဘောမတူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ >
< start="74.15" dur="4.3"> ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ပြောနေတာက“ Miami-Dade Corrections and Rehabilitation >
< start="78.45" dur="4.63"> ဌာန” တွင်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Boot စခန်းအပါအ ၀ င်ယူနစ်များစွာပါဝင်သည်။ >
< start="83.08" dur="3.6"> အဲဒီစခန်းကိုမဖြတ်နိုင်တဲ့သူတွေကထောင်ထဲရောက်သွားနိုင်တယ် >
< start="86.68" dur="1"> သူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်များတွင်။ >
< start="87.68" dur="4.11"> Boot Camp သည်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ထောင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပြောလိမ့်မည် >
< start="91.79" dur="1.14"> အားလပ်ရက်စခန်း။ >
< start="92.93" dur="5.5"> စနစ်တစ်ခုလုံးတွင်လူပေါင်း ၇၀၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိသော်လည်းလူပေါင်း ၁၁၄,၀၀၀ ကဲ့သို့သောအရာသည်အလိုရှိသည် >
< start="98.43" dur="4.2"> နှစ်စဉ်တံခါးများကိုဖြတ်သန်းပါ - တစ်ရက်လျှင် ၃၂၀ ဖြစ်သည်။ >
< start="102.63" dur="2.11"> ဒါကအလုပ်များတဲ့နေရာပါ၊ >
< start="104.74" dur="3.48"> သို့တိုင်၎င်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ၇ ခုမြောက်အကြီးဆုံးထောင်စနစ်ဖြစ်သည်။ >
< start="108.22" dur="3.64"> အကျဉ်းသားအများစုသည်ထိုတွင်တာရှည်စွာနေထိုင်ကြပြီးစနစ်တစ်ခုလုံးတွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကုန်ဆုံးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ >
< start="111.86" dur="4.07"> ၂၂ ရက်ပဲရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်းရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကိုစောင့်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မယ် >
< start="115.93" dur="1.74"> ငါးနှစ်။ >
< start="117.67" dur="4.229"> ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအဓိကယူနစ်များထဲမှတစ်ခု၊ ခေါင်းစဉ်များအများဆုံးထိသည့်နေရာတစ်ခုသို့ပို့ဆောင်သည် >
< start="121.899" dur="1.151"> ၎င်း၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအခြေအနေများသည်။ >
< start="123.05" dur="4.98"> ၎င်းကိုတရားခွင်မတိုင်မီထိန်းသိမ်းရေးဌာနဟုခေါ်တွင်သည်သို့မဟုတ်တစ်ခါတစ်ရံပင်မထောင်ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ >
< start="128.03" dur="3.34"> တစ်ချိန်တည်းတွင်လူ ၁,၇၀၀ ဝန်းကျင်ရှိသည်။ >
< start="131.37" dur="3.83"> သူတို့ထဲကသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေကတည်းကအများစုမှာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအပြစ်မဲ့နေကြသည် >
< start="135.2" dur="2.77"> အပြစ်ရှိပေမယ့်တရားရုံးရက်စွဲကိုစောင့်ဆိုင်းနှစ်ပေါင်းကြာလိမ့်မယ်။ >
< start="137.97" dur="3.96"> ဆဲလ်တွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါဒီအခြေအနေမျိုးကိုဖြေရှင်းဖို့မလွယ်ကူပါဘူး >
< start="141.93" dur="2.89"> မတည်ငြိမ်သောအရာများမည်မျှရှိသည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ >
< start="144.82" dur="3.559"> အကျဉ်းထောင်များ၌အကျဉ်းကျခံနေရသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့အမှုကိစ္စများကိုတိုက်ခိုက်လိုသောကြောင့်၊ >
< start="148.379" dur="3.781"> အပြင်ဘက်မှာအပြစ်မဲ့လားထောင်ထဲကိုထွက်ချင်တာလား >
< start="152.16" dur="3.7"> အဆိုးဆုံးအထပ်မှာစွပ်စွဲခံရသူများထဲတွင်အန္တရာယ်အရှိဆုံးပြစ်မှုကျူးလွန်သူများထားရှိသည့်နေရာများဖြစ်သည် >
< start="155.86" dur="1.22"> ကြမ်းပြင်ငါးခုနှင့်ခြောက်လုံး။ >
< start="157.08" dur="4.44"> ဒီမှာအခန်းတွေကများသောအားဖြင့်ယောက်ျား ၁၅ ယောက်ကနေ ၂၅ ယောက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအဲဒီမှာရှိနေတယ် >
< start="161.52" dur="1.249"> အဆင့်ဆင့်တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ။ >
< start="162.769" dur="4.382"> အဲဒီမှာယောက်ျားတွေအများကြီးပြောချင်သကဲ့သို့, ဒါဟာအသင့်လျော်ဆုံး၏ရှင်သန်မှုပါပဲ, ဒါကြောင့်သင်မလျှင် >
< start="167.151" dur="2.599"> သင်တစ် ဦး ခက်ခဲအချိန်ရှိစေခြင်းငှါတစ် ဦး တိုက်လေယာဉ်။ >
< start="169.75" dur="2.6"> သငျသညျအခြို့သောတုံးလိုချင်တယ်, သင်ကအဘို့စစ်တိုက်ခြင်းငှါရှိသည်လိမ့်မယ်။ >
< start="172.35" dur="3.49"> အိုကေ၊ သင်သည်ဆဲလ်ထဲတွင်အဆိုးဆုံးနေရာရှိခြင်းကိုဂရုမစိုက်ပါ၊ သို့သော်တစ်ယောက်ယောက်ကသာလျှင် >
< start="175.84" dur="1.02"> မင်းပစ္စည်းတွေကိုယူလား >
< start="176.86" dur="2.599"> အကျဉ်းသားတစ် ဦး က“ အားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်အမြတ်ထုတ်တာပါ” ဟုပြောသည်။ >
< start="179.459" dur="3.691"> မင်းရဲ့အရာတွေကိုမင်းတိုက်မတိုက်ဘူးဆိုရင်မင်းဟာအချိန်ငရဲတစ်ခုရှိလိမ့်မယ် >
< start="183.15" dur="1.19"> အနုတ်လက္ခဏာ။ >
< start="184.34" dur="4.72"> သငျသညျ snitch လျှင်, သင်ကာကွယ်မှုထဲသို့သွင်းထားရမဟုတ်လျှင်သင်သွားလေရာရာ၌ရိုက်နှက်ပါလိမ့်မယ်။ >
< start="189.06" dur="3.899"> အခြားအကျဉ်းသားတစ် ဦး ကသူ၏အခန်းထဲရှိသင်၏ပထမနေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့သင်စစ်တိုက်ရမည်ဖြစ်သည် >
< start="192.959" dur="2.301"> သူတို့သည်သင့်ကိုလူတစ် ဦး အနေဖြင့်စစ်ဆေးလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ >
< start="195.26" dur="1"> ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲ? >
< start="196.26" dur="3.38"> သင်မတိုက်ခိုက်လျှင်သူ၌သင်တစ်ခုခုမှားနေကြောင်းလက္ခဏာပြသည်။ >
< start="199.64" dur="2.269"> မင်းကမင်းကိုမတိုက်ခိုက်ချင်ဘူး၊ >
< start="201.909" dur="4.151"> ဒါဟာကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဟန်မရှိပေမယ့်အကျဉ်းသားကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဖြစ်တယ်၊ >
< start="206.06" dur="4.04"> ဒီအချက်ကအကျဉ်းသားတွေဟာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှင်းပြနိုင်ဘူး။ >
< start="210.1" dur="4.67"> ကောင်လေးတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတိုက်ဘူးဆိုရင်အဲဒါကိုလိုက်နာမယ်ဆိုတာရှင်းပြခဲ့တယ် >
< start="214.77" dur="2.87"> ဆဲလ်တပြင်လုံးကိုလူတစ် ဦး ရိုက်နှက်လိမ့်မယ် code ။ >
< start="217.64" dur="3.33"> တစ်ခါတစ်ရံအသေးငယ်ဆုံးချိုးဖောက်မှုအတွက်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုရိုက်နှက်တတ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည် >
< start="220.97" dur="2"> သူတကယ်မလုပ်ခဲ့သည့်အရာအားစွပ်စွဲခဲ့သည်။ >
< start="222.97" dur="1.5"> ငါ့အစားအသောက်ကိုအဘယ်သူခိုးသနည်း။ >
< start="224.47" dur="3.03"> မည်သူမျှမတုန့်ပြန်ပါ။ >
< start="227.5" dur="1.849"> မင်းကအစွမ်းမဲ့တယ်၊ မင်းအပြစ်တင်တာပဲ။ >
< start="229.349" dur="2.851"> သူမလုပ်ခဲ့ရင်သူမလုပ်သင့်ဘူး၊ >
< start="232.2" dur="2.7"> လူတိုင်းအဲဒီမှာထဲမှာပြောသကဲ့သို့, သင်ရုံပြန်တိုက်ခိုက်ရန်ရှိသည်။ >
< start="234.9" dur="4.039"> သူတို့မှာသူတို့ရေးထားတဲ့လက်ရေးမူတွေအများကြီးရှိပြီး GABOS လို့ခေါ်တယ်။ >
< start="238.939" dur="3.281"> ဆိုလိုသည်မှာ“ ဂိမ်းသည်စာနာမှုအပေါ်အခြေခံသည်မဟုတ်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ >
< start="242.22" dur="3.82"> အချို့သောဖယ်ဒရယ်အကျဉ်းထောင်များနှင့်မတူဘဲမည်သူမဆို၏လက်အောက်သို့ကျရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ >
< start="246.04" dur="4.059"> အကျဉ်းထောင်သည်ရက်စက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကြားရသော်ငြားထောင်သည်အကျဉ်းထောင်ထက် ပို၍ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာရှိသည် >
< start="250.099" dur="1.081"> ထောင်စနစ်များ၏။ >
< start="251.18" dur="4.01"> ဖိုရမ်များကိုသာသွားပါ၊ >
< start="255.19" dur="3.53"> ထောင်ထဲမှာအတော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ >
< start="258.72" dur="4.55"> သေချာတာကလူအများစုကအပြစ်ရှိတယ်လို့တောင်မသတ်မှတ်ကြသေးဘူး >
< start="263.27" dur="2.01"> ပိုဆိုးနှင့်ပိုပြီးခြိမ်းခြောက်မှုများရင်ဆိုင်ရ။ >
< start="265.28" dur="4.35"> ပထမ ဦး ဆုံးတိုင်မားများသည်အလွန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်ခဲ့ပြီးများသောအားဖြင့်ဖြစ်သင့်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ >
< start="269.63" dur="4.68"> နေမကောင်းအဲဒီမှာအတွက်ဝန်ရ; အစားအစာကကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ ဆဲလ်တွေကညစ်ပတ်တယ်၊ >
< start="274.31" dur="1.3"> ကြောင်းဆဲလ်ထဲမှာသူတို့ရဲ့အချိန်၏။ >
< start="275.61" dur="3.36"> အကျဉ်းသားအမြောက်အများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ထိုအရာများမှလွတ်မြောက်ရန်သူတို့က“ ကျည်ဆံ” လုပ်လိမ့်မည်ဟုဆိုကြသည် >
< start="278.97" dur="1"> မင်္ဂလာပါ။ >
< start="279.97" dur="1.669"> ကျည်ဆံသည်ထောင်ထဲတွင်တစ်နှစ်ဖြစ်သည်။ >
< start="281.639" dur="3.121"> ဘာဖြစ်လို့ထောင်ထဲမှာအခြေအနေတွေပိုဆိုးရွားနေရတာလဲ၊ >
< start="284.76" dur="3.159"> ကောင်းပြီ၊ သူတို့ကလူတစ်ယောက်ကိုရှည်လျားလွန်းစေဖို့ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ >
< start="287.919" dur="4.191"> ပြproblemနာကတိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုတောင်မှငရဲဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ >
< start="292.11" dur="2.149"> သူတို့ရဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးနှောင့်နှေးလျှင်တိုတောင်းနေ။ >
< start="294.259" dur="2.171"> အကျဉ်းထောင်သည်နှစ်သိမ့်မှုတစ်စုံတစ်ရာပေးရန်ကမ်းလှမ်းထားသည်။ >
< start="296.43" dur="4.72"> ထောင်သည်အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ငရဲဖြစ်သည်။ ထောင်ထဲတွင်ငရဲကလေးနှင့်အဆိုးရွားဆုံးသောနာကျင်မှုကိုခံစားနေရသည် >
< start="301.15" dur="1.859"> မင်းထွက်ပေါက်ကိုမသိဘူးလား >
< start="303.009" dur="4.111"> ထိုကြောင့်အကျဉ်းသားများသည်များသောအားဖြင့်အမျက်ထွက်ခြင်း၊ စိတ်ဆိုးခြင်း၊ >
< start="307.12" dur="3.63"> ၁၈ လကြာ crank-athon ချွတ်ပြီးနောက်အရူးဖြစ်သည်။ >
< start="310.75" dur="3.13"> ပြောသမျှအားလုံးဟာအဆိုးဆုံးနေရာတွေကိုပို့လိုက်တာလား။ >
< start="313.88" dur="4.379"> မင်းကိုမိုင်ယာမီရှိ ၆ ထပ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းသို့ပြန်သွားကြစို့။ >
< start="318.259" dur="3.861"> တစ်ခန်းထဲရောက်တာနဲ့အစောင့်တစ်ယောက်ကထွက်သွားတယ်၊ ပြီးတော့အစောင့်တွေကသူတို့တုံ့ပြန်လို့မရဘူးဆိုတာဝန်ခံကြတယ် >
< start="322.12" dur="2.03"> အဲဒါကိုရပ်တန့်ဖို့အလုံအလောက်အကြမ်းဖက်အလျင်အမြန်ရန်။ >
< start="324.15" dur="2.57"> သူတို့သည်အကျဉ်းသားများအားသူတို့၏သင်္ကေတများသို့ထားခဲ့သည်ကိုဝန်ခံကြသည်။ >
< start="326.72" dur="3.6"> ထိုအစောင့်များကပြင်းထန်သောရိုက်နှက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ဘာမျှမတတ်နိုင်ဟုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆိုကြသည် >
< start="330.32" dur="1.37"> ထိုး, ခိုးမှု။ >
< start="331.69" dur="3.34"> နေရာတိုင်းမှာရှိနေပြီးအရာအားလုံးကိုမြင်နိုင်ဖို့သူတို့မှာမလုံလောက်ဘူး။ >
< start="335.03" dur="4.17"> ထိုအစောင့်သည်ထွက်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ၅ ထပ်နှင့် ၆ ထပ်တွင်စစ်တိုက်ရန်သင်ကျန်ရစ်သည် >
< start="339.2" dur="2.469"> ဒီအရုပ်ဆိုးဟောင်းနွမ်းအညိုရောင်အဆောက်အ ဦး ။ >
< start="341.669" dur="1"> ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲ? >
< start="342.669" dur="1.361"> အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကတလျှောက်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး? >
< start="344.03" dur="2.729"> အကျဉ်းသားတစ် ဦး က“ ဒီကုဒ်ကကုဒ်ပါ” ဟုဖြေသည်။ >
< start="346.759" dur="1.19"> ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? >
< start="347.949" dur="3.981"> ဆိုလိုသည်မှာသင်တိုက်ခိုက်နေသူကိုမလေးမစားလုပ်နေသည်ဟုသင်မြင်ပါက၊ >
< start="351.93" dur="4.2"> လူတစ်ယောက်နှင့်သင်အကြောင်းပြခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်စတင်ရန်သင့်လျော်သောနေရာမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ >
< start="356.13" dur="4.349"> လမ်းမများမှလာသူများသည်လမ်း၏စည်းမျဉ်းကိုနားမလည်ကြပါ။ >
< start="360.479" dur="3.681"> ဤသို့သောအနောက်တိုင်းသဘောထားသည်သိပ္ပံပညာရှင်များဟုခေါ်သည့်“ ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည် >
< start="364.16" dur="1"> ဂုဏ်အသရေ။ " >
< start="365.16" dur="4.09"> မင်းယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုရှုတ်ချတယ်၊ သင်တိုက်ခိုက်တယ်၊ ဓားဆွဲတယ်၊ >
< start="369.25" dur="4.069"> ပြင်ပကမ္ဘာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာမှထွက်ပေါ်လာပြီးများသောအားဖြင့်ထောင်ထဲတွင်ရှိသည် >
< start="373.319" dur="3.231"> ဒီကုဒ်, ဂုဏ်အသရေ၏ဤယဉ်ကျေးမှု, နေဆဲပျံ့နှံ့နေသည်။ >
< start="376.55" dur="4.18"> မိုင်ယာမီရှိအဓိကထောင်အားခိုးယူခြင်းနှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းတို့တွင်အဆိုးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="380.73" dur="3.23"> အမရေိကအထီး -to- အထီးအလွဲသုံးစားမှု၏အခြားအမျိုးအစားများအတွက်။ >
< start="383.96" dur="3.84"> အစောင့်များသည်ဆဲလ်များကိုတစ်နာရီလျှင်တစ်နာရီသာကင်းလှည့်လျှင်ကြောက်စရာကောင်းသည့်အရာများဖြစ်လာနိုင်သည်။ >
< start="387.8" dur="3.54"> အားနည်းသောအကျဉ်းသားများသည်အထွတ်အမြတ်ထားသည့်သားကောင်များကြားတွင်သားကောင်အဖြစ်သာကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ >
< start="391.34" dur="4.09"> ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာကထောင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအများကြီးတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးတစ်ခုကအများကြီးပိုများခဲ့ပါတယ် >
< start="395.43" dur="2.269"> ကင်မရာများကို install လုပ်ပြီးပါပြီ။ >
< start="397.699" dur="4.44"> ထိုအခါစိတ်ရောဂါမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသောက်သောလူအများနေထိုင်ရာဤထောင်၏ပြtheနာရှိနေသည်။ >
< start="402.139" dur="4.241"> စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းဖြစ်နေသူတစ် ဦး သည်အခြားအကျဉ်းသားများနည်းတူပြုမူသည့်အခါအကျဉ်းသားတိုက်ပွဲများမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည် >
< start="406.38" dur="1"> မကြိုက်ဘူး >
< start="407.38" dur="3.88"> မာရှယ်စီမံကိန်းကဖော်ပြသည်မှာ“ မိုင်ယာမီအကျဉ်းထောင်သည်စနစ်အတွက်အကြီးဆုံးဌာနဖြစ်သည် >
< start="411.26" dur="1.7"> ဖလော်ရီဒါမှာရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေမကောင်းကလူ။ " >
< start="412.96" dur="4.42"> စိတ်ရောဂါသည်များသည်လုယူရာဥစ္စာဖြစ်လာလေ့ရှိပြီးအမျိုးသား ၂၀ ကျော်နှင့်အတူကြမ်းပြင်ပေါ်သို့တက်လာတတ်သည် >
< start="417.38" dur="1.39"> သူတို့ကို pummel ဖို့လှည့်။ >
< start="418.77" dur="2.23"> ဤသည်ဆုတ်ခွာကုသပုံဖြစ်ပါတယ်။ >
< start="421" dur="2.58"> မည်သည့်နေ့ရက်တွင်မဆိုလူနာသည်ရောဂါလက္ခဏာမပြနိုင်သည့်အပြင်ထွက်လာတတ်သည်။ >
< start="423.58" dur="2.25"> ၎င်းသည်အသွေးဖြန်းနေသောဆုံလည်တံခါးနှင့်တူသည်။ >
< start="425.83" dur="4.18"> တကယ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေများလွန်းလို့တရားရေးဌာနကမိုင်ယာမီ - ဒေးဒ်ကပြောတယ် >
< start="430.01" dur="5.409"> ထောင်စနစ်သည်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောကြောင့်အကျဉ်းသားများသာမကအစောင့်များသည်လည်းအန္တရာယ်များစွာနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ >
< start="435.419" dur="1.84"> တစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုတယ် "ဟုအဆိုပါဌာနကဆိုသည်။ >
< start="437.259" dur="4.771"> လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကငါးလအတွင်းလူရှစ် ဦး သေဆုံးပြီးနောက်ထောင်သည်စိစစ်စစ်ဆေးမှုများစွာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ >
< start="442.03" dur="5.1"> စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမာသူများသေဆုံးခြင်းသုံးခုသည်အထူးသဖြင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟု DoJ ကဆိုသည်။ >
< start="447.13" dur="4.39"> ဆိုင်းငံနေစဉ်တွင်ကားမောင်းရန် ၀ င်ရောက်နေသောယောက်ျားတစ်ယောက်သည်စနေနေ့တွင် ၀ င်ရောက်ပြီးနောက်သေဆုံးသွားသည် >
< start="451.52" dur="1"> တနင်္လာနေ့။ >
< start="452.52" dur="3.869"> တစ်ပတ်အတွင်းနောက်ထပ်နှစ် ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ ကော်မရှင်နာတစ် ဦး ကမူစနစ်သည်အလွန်အမင်းကျိုးပဲ့နေသည်ဟုဆိုခဲ့သည် >
< start="456.389" dur="4.601"> သေဆုံးသွားသောရှစ် ဦး မှတစ် ဦး သည်အကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရန်ဆင်းသက်ရန်ခုန်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် >
< start="460.99" dur="1.76"> သူ့ကိုရိုက်နှက်ဖို့သူ့နောက်ကြွလာခဲ့ကြသည်။ >
< start="462.75" dur="1.62"> ဓားများကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ >
< start="464.37" dur="4.04"> ထိုအချိန်မှစ၍ ပိတ်ခဲ့သည့်အဆိုးဆုံးကြမ်းပြင်ကိုတစ်ခါတစ်ရံ“ မေ့လျော့ကြမ်းပြင်” ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ >
< start="468.41" dur="3.979"> ဒါဟာနဝမအဆင့်ဖြစ်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမမာဖြစ်နေတဲ့လူအများစုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့တယ်။ >
< start="472.389" dur="3.861"> အကျဉ်းသားများမကြာခဏစွန့်ခွာ။ လျစ်လျူရှုခံကြရပြီးများစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်အကျဉ်းသားများဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည် >
< start="476.25" dur="1.55"> ကိုယ်ပိုင်ဘဝ >
< start="477.8" dur="3.92"> ဤအဆင့်တွင်ထိုကာလ၌အကျဉ်းသားများမှာကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်စောင်မပါဘဲအိပ်ခဲ့ကြရသည် >
< start="481.72" dur="2.91"> ၎င်းသည်လူသားဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သောစိတ်ရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာစက်ရုံဖြစ်သည်။ >
< start="484.63" dur="3.759"> အကျဉ်းသားအချို့သည်အိမ်သာထဲမှသောက်နေရသည်ဟုတွေ့ရှိရပြီး၊ >
< start="488.389" dur="1.24"> "ကြောက်မက်ဖွယ်" ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်ခဲ့သည်။ >
< start="489.629" dur="1.401"> အများပြည်သူအော်ဟစ်သံများရှိခဲ့သည် >
< start="491.03" dur="3.65"> ဒါပေမယ့်မင်းကြားဖူးတဲ့အတိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြwithနာများရှိနေသူတစ် ဦး သည်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရသောအခါပြproblemsနာများရှိနေသေးသည် >
< start="494.68" dur="5.84"> လူသားထုတန်ဖိုးများကိုတမင်သက်သက်မလိုအပ်သောမျက်မှောက်ခေတ်လမ်း gladiators နှင့်အနိုင်ကျင့်သူများနှင့်အတူ။ >
< start="500.52" dur="4.84"> အထပ်အားလုံးဟာငါတို့ပြောခဲ့သည့်ပုံပြင်များကဲ့သို့မကောင်းသကဲ့သို့အထူးသဖြင့်အချို့ကိစ္စများတွင်ဖြစ်သည် >
< start="505.36" dur="2.81"> အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အားနည်းချက်ရှိသူများတစ် ဦး တည်းနေအိမ်လိမ့်မည်။ >
< start="508.17" dur="4.24"> မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အဓိကထောင်ထဲမှာရှိမြင့်သောကြမ်းပြင်များထဲမှတက်အဆုံးသတ်နှင့်သင်ဆက်ဆက်မြင်လိမ့်မည် >
< start="512.41" dur="4.66"> ကမ္ဘာပေါ်မှာအပြင်းထန်ဆုံးအကျဉ်းထောင်တစ်ခုမှာချုပ်နှောင်ခံနေရတာနဲ့တူတယ်။ >
< start="517.07" dur="3.82"> အခြားထူးခြားသောပြilနာများလည်းရှိသည်။ >
< start="520.89" dur="5.35"> 2019 ခုနှစ်တွင်ရုတ်တရက်နာမကျန်းမှုကြောင့်ဤလူမှလူ 17 ဦး ကိုဆေးရုံသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ >
< start="526.24" dur="1.76"> အများအပြားကန်ထမ်းများလွန်းပါကဆင်းလာ၏။ >
< start="528" dur="1"> ဘာဖြစ်သွားတာလဲ? >
< start="529" dur="1.35"> ဘယ်သူမှမသိဘူး >
< start="530.35" dur="3.66"> ထူးဆန်းသောအရည်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်ဗုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုခေါ်ယူခဲ့သော်လည်းပြန်လှည့်လာခဲ့သည် >
< start="534.01" dur="1.09"> အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ထွက်။ >
< start="535.1" dur="4.23"> လူတို့ကစစစစစစခိုးဝဲသောအကြောင်းပြချက်မှာအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောမီးခိုးငွေ့များဖြစ်သည် >
< start="539.33" dur="1"> မူးယစ်ဆေးဝါး။ >
< start="540.33" dur="3.75"> အကယ်၍ အဝေးမှမီးခိုးငွေ့များကိုရှူမိပါကလူတစ်ယောက်ကိုဆိုးရွားလှသည့်ပျော့ပျောင်းစေနိုင်သည်။ >
< start="544.08" dur="2.24"> သူတို့အဲဒီမှာဘာကမ္ဘာပေါ်မှာဆေးလိပ်သောက်နိုင်ခဲ့တာလဲ >
< start="546.32" dur="1"> အာရုံကြောဓာတ်ငွေ့? >
< start="547.32" dur="2.36"> ဒီနေရာဟာဘယ်လောက်အရူးလဲဆိုတာပဲပြတယ်။ >
< start="549.68" dur="4.37"> ဤထောင်ကိုရည်စူးထားသည့် Facebook စာမျက်နှာတွင်တွေ့ရှိသောပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ဖြင့်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထားခဲ့ပါလိမ့်မည်။ >
< start="554.05" dur="1.12"> "ငရဲပြည်မှကြိုဆိုပါတယ်။ >
< start="555.17" dur="4.77"> လူတစ် ဦး သည်ထောင်ချခံရခြင်း၏ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းထက်သေခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည် >
< start="559.94" dur="3.05"> ဒီညစ်ပတ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောရဆေိုးအတွက်။ " >
< start="562.99" dur="4.21"> မင်းကို Miami Jail ကိုပို့ဖို့မလိုချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲ့နှစ်ခုထဲကတစ်ခုကိုနှိပ်ချင်တယ် >
< start="567.2" dur="1"> ဗွီဒီယိုများ >
< start="568.2" dur="4.36"> ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကို Infographics Show (သို့) ဒီဗီဒီယိုကနေနောက်တစ်ခုကြည့်ပါ ဦး >
< start="572.56" dur="1"> ဒီမှာ။ >
< start="573.56" dur="3.48"> သင်တစ် ဦး တည်းသာရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အခြားဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကြည့်။ သွားကြည့်ပါ။ >